Qiimaha gaadhiga ee guriga ayaa la go'aamiyay! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaQiimaha gaadhiga ee guriga ayaa la go'aamiyay!
28 / 01 / 2020 16 Bursa, GUUD, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, baabuurta, TURKEY
Qiimaha gaadhiga guriga ayaa la go'aamiyay
Turkey ayaa Automobile Enterprise Group (TOGG) CEO GurcanTurkoglu King, wadaagno macluumaad cusub oo ku saabsan automakers qoyska. Karakaş wuxuu yidhi, waxaan kala hadlaynaa Bosch qaybta korantada gawaarida. Waxaan la saxeexnay heshiis qarsoodi ah 6 shirkadood oo Shiineys ah batteriga gaariga. ”
Turkey ayaa Automobile Enterprise Group (TOGG) CEO GurcanTurkoglu Karakas, ayaa sheegay in faahfaahinta cusub oo ku saabsan automakers qoyska.
Sida uu sheegayo warkii Burak Cokan ee ka soo baxa Hürriyet,Gürcan Karakaş wuxuu yidhi, Waxaan la shaqeynay kuwa adduunka ugu fiican, laga bilaabo sumadaynta ilaa naqshadeynta. Ma jiraan shirkado badan oo koronto sameyn kara markay dhashaan. Waxaan lashaqeeynaa la-hawlgalayaal helay farsamadaas oo aan ka wada shaqeyneynaa howshan. Waxaan kala hadlaynaa Bosch xagga korantada gaariga. Waxaan la saxeexnay heshiis qarsoodi ah 6 shirkadood oo Shiineys ah batteriga gaariga. Waxaan la tacaali doonaa mid ka mid ah. Waxaan u doorannay shirkadda injineeriyada Jarmalka ee EDAG inay noqoto shuraakadda tikniyoolajiyadda ee is-dhexgalka gawaarida. Myra waa mid ka mid ah wada-hawlgalayaashayada, gaar ahaan fiidkii makaanikada, ee ku saabsan nidaamyada is-leyska ee Boqortooyada Midowday ay aqbashay. Waxaan Talyaniga kula heshiinay qaabeynta. ”
Karakaş wuxuu sii waday sida soo socota: “Waxaan eegeynaa cidda adduunka ugu fiican. Waxaan soo gabagabeyn doonaa xulashooyinka alaab-qeybiyeyaashayada sida Abriil iyo Maajo. Waxaan si dalkeenna keeni kartaa technology this kaasoo aannu u raadinayso waxaa laga Turkey. Waxaan sameynay baaritaano qarash aad u culus. Ma laga yaabaa in aad soo saaro dalka Turkiga, ka badan kharash-ool ah Ma meelo kale ahbaa si ay u eegaan isaga. Markii aan hor fariisanno lammaanaheenna hortiisa, waan ognahay waxa waxaasi yahay. ”
SIDEE AYUU MADAXWEYNAHA UGU JIRTAA?
Gürcan Karakaş, oo aan la wadaagin qiimaha qiimaha gawaarida la soo saari doono, ayaa sharaxay sababta tan:
Maaha wax sax ah in la wadaago sicirka maxaa yeelay ma rabno in aan siinno kuwa kula tartamaya wax macluumaad ah oo arrintan ku saabsan. Si kastaba ha noqotee, illaa 2020, qiimaha kaladuwan ee naaftada ama gawaarida shidaalka ku shaqeeya ee lagu iibiyo qeybta C-SUV waxay ku kala duwan yihiin 250 kun iyo 300 kun TL. Sannadka marka gaadhiga maxalliga ah la sii deyn doono, wuxuu awood u yeelan doonaa inuu la tartamo qiimaha gawaaridan. ”
Aasaaska XAQIIQOOYINKA AUTOMOBILE FASALKA WAA IN AY SAMEEYAAN
Gürcan Karakaş wuxuu sheegay in sahaminta dhulka ee dhismaha warshaddii TOGG ay bilaabatay wuxuuna sheegay in aasaaska warshadda la dhigi doono May.
Karakaş wuxuu yidhi, “Marka la gaaro 2022, waxaan gawaaridayaga hore ee wax soo saarka ah ka yareyn doonaa cajaladaha. Warshadeenna, oo gaari doonta celcelis ahaan soosaar sannadle ah oo ah 15 kun unug iyada oo maalgalintiisu tahay 22 bilyan oo TL ah muddo 175 sano ah, waxaan hiigsaneynaa in aan ka soo qaadno wadar dhan 2032 milyan oo gawaarida xamuulka ah sannadka 1. ”
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in dhoofinta ugu horreysa la samayn karo si ku-siman sannadka 2024, Karakaş wuxuu yidhi, “Haatan, waxaan u qoondaynay 10 boqolkiiba awoodda dhoofinta. Si kastaba ha noqotee, way kordhin kartaa xitaa intaa ka badan iyadoo loo eegayo baahidaas. Waan la socon karnaa isbadalkan. ”
Warshadda Gawaarida Deegaanka
Gawaarida Hit Mitobus Road
qiimaha gaariga gudaha